Adeeg fulin fulineed | Adeegga dhammaystirka Shiinaha Dheecaan & Ganacsade
Sidee ayuu xulkeenna iyo adeegteennu u caawiyay macaamiisha? Macaamiilkii ayaa yiri: Waxaan aad ula yaabay xirmada alaabtu inay aad u qurux badan tahay, badeecaduna sideedii tahay, macaamilkuna aad ugu qanacsan yahay. —— Roman Waxaan ku siineynaa adeegsi dhameystiran oo ku saabsan soo qaadista iyo xirxirida loogu talagalay inay la mid noqoto baahidaada ganacsi! 99.6% xulashada sicirka saxan Si buuxda Loogu Dhexgeliyay websaydhkaaga iyo iibinta dhufto ee iswada kantaroolada keydinta otomaatiga ah Cusbooneysiinta Adeeg isku mid ah Amarro xirmooyin Xirfad leh Lahelay ...
Waa maxay adeegyada fulintu? Adeeg fulin waa bakhaar dhinac saddexaad ah oo kuu diyaariya kuna amraya amarradaada adiga. Waxay tan ku sameysaa xaruntiisa fulinteeda. Adeegyada dhammaystirka Ecommerce waxay ku habboon yihiin ganacsiyada aan rabin inay wax ka qabtaan maraakiibta ama ay ka korodheen awoodda bakhaarrada jira illaa heer aysan awoodin inay markab amarro naftooda mar dambe sii maraan. Qalabaynta fulinta 1. Sunson API waxay kuu sahleysaa inaad dhexgaliso boggaga internetka isla markaana aad is waafajiso xogta. Wada-shaqeynta ...
Si fudud layaab fudud u Dukaameysi dalab oo ay la socoto Sunsonexpress. Waxaan ka caawinnaa Dukaamaysiga ganacsatada inay fuliyaan amarrada sida ugu dhakhsaha badan uguna kharash badan sida ugu macquulsan si ay ula kulmaan filashooyinka macaamiishooda. Soo iibso si aan kala go 'lahayn ula dhex gasho barnaamijkeena si otomaatig u ahaado fulinta iyo maareynta alaabada, taas oo kuu oggolaaneysa inaad diirada saarto iibinta iyo kobcinta meheraddaada - oo aanad ka welwelin fulinta fulinta. Isdhexgalka fudud Ku xir Dukaankaaga Shopify iyo barnaamijka fulinta Sunsonexpress dhowr talaabo oo fudud. Xiriir dukaankaaga ...
Ku calaamadee Naftaada Adeegyadeena Qiimaha-Dheer! Casriyaynta Calaamadaha 1. Ku darista suuq geynta si aad uga farxiso oo aad u sii haysato macaamiishaada. 2. Ku wareejinta alaabadaada sanduuqyada habaysan, ee qaabka aad doorbidayso. 3. Qalabaynta iyo isku-ururintu waxay xoojineysaa silsiladdaada waxayna fududeyneysaa habka qaybinta. 4. Lableling waa hawl dhib badan laakiin hawl muhiim ah markaa waanu kula wareegeynaa, waxaanna u dhigeynaa sumado si ku habboon si loo hubiyo muuqaalka alaabtaada. Adeegga Bixinta Qalabka ee sida dhaqsaha leh u socda ...
Bixiso adeeg bakhaar hufan, amni leh oo bilaash ah Shiinaha Waxaan ku leenahay 3000 + mitir laba jibbaaran Shenzhen ， Sii adeegsi bilaash ah seddex bilood macaamiisha cusub, sidoo kale bilaash ka dib 3months oo ku saleysan waxaad haysataa ugu yaraan 60Pcs amarada dhoofinta bishiiba ， 3000m² bakhaar waxay dabooli kartaa baahidaada sii kordheysa ， si deg deg ah uga baaraandegtaa amarkaaga oo isu diyaarisaa shixnad. Waxaan nahay Bakhaarka Shiinaha si aan u ilaalino keydkaaga mid amaan ah ， oo lagu dhameystirayo ilaalinta 24/7 iyo amniga. Step1 ： Bakhaarka Bakhaarka ...
Faa'iidooyinka daadinta daadinta daadinta waa qaab ganacsi oo weyn oo loogu talagalay ganacsatada doonaya inay ku bilaabaan maxaa yeelay waa la heli karaa. Hoos u dhigista, waxaad si dhakhso leh u tijaabin kartaa fikradaha ganacsi ee kaladuwan ee leh hoos u dhac xadidan, taas oo kuu ogolaaneysa inaad wax badan ka barato sida loo doorto oo loo suuq geeyo alaabooyinka loo baahan yahay. Halkan waxaa ku yaal dhowr sababood oo kale oo sababta daadinta u tahay nooc caan ah. 1. Raasamaal yar ayaa loo baahan yahay Malaha faa'iidada ugu weyn ee daadinta dhibcaha ayaa ah inay suurtagal tahay in la furo dukaanka ganacsiga ...